အတွေးအမြင် – The Blog of Aung
စာရေးသူ၏ အထင်အမြင်နှင့် သဘော အယူအဆများ
Author aungPosted on May 21, 2019 May 21, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags ဘာသာစကား1 Comment on မြန်မာစကား ပြောတတ်သေးရဲ့လား?
Author aungPosted on March 28, 2019 March 28, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags ရုပ်ရှင်1 Comment on ထူးချွန်ဆုလား? ပရိသတ်ကြိုက်ဆုလား?
Author aungPosted on February 22, 2019 February 22, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags နည်းပညာ, ရုပ်ရှင်Leaveacomment on ကျွဲအိုင်ထဲက ဖားကလေး
Author aungPosted on January 21, 2019 August 24, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags ယဥ်ကျေးမှု, သြစတေးလျLeaveacomment on အကြွား ယဥ်ကျေးမှု
Author aungPosted on January 19, 2019 January 21, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags လူဇရိုက်1 Comment on တောသား ဗီဇ
စာရေးသူဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ နယူးဆောက်ဝေးလ် ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်လျက် သူ့ ရဲ့ စိတ်ကူး ထင်မြင်ချက်၊ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတနဲ့ အခြား သူ စိတ်ဝင်စားရာ အကြောင်းအရာများကို ဤကိုယ်ပိုင် အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသား ထုတ်လွှင့် ဖြန့်ဝေပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာမျက်နှာမှာ အသစ်တင်သည့် အကြောင်းအရာများ မပြတ်ဖတ်လိုပါက အောက်ပါ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာကို နှစ်သက်မှု (Like) ပြုလုပ်ထားပါ။